बिटक्वाइनमा लगानी गर्नु र जुवा खेल्नु उस्तै अन्तरबार्ता लेखमा हाम्रो प्रतिक्रिया
07-16-2018, 04:05 PM (This post was last modified: 09-11-2018, 11:45 AM by admin.)
Nepal magazine Article
बिटक्वाइनमा लगानी गर्नु र जुवा खेल्नु उस्तै भन्ने नेपाल साप्ताहिक को अन्तरबार्ता लेख पढे पछि बिटक्वाइनका बारेमा केहि कुरा लेख्न मान्न लाग्यो! बिटक्वाइनलाई केहि वर्ष अघि देखि नजिकैबाट हेरिरहेको र येही क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आइरहेको हैसियतमा बिटक्वाइनका बारेमा आफुले जानेका २/४ कुराहरु लेख्दै छु! बिटक्वाइन प्राबिधिक हिसाबले अलि जटिल भएको कारणले पनि आम जनमानसमा विभिन्न किसिमका नकारात्मक भ्रमहरु फैलिरहेको पाइएको छ! केहिले बिटक्वाइनलाई यसको मूल्य संग मात्र समेटेर हेरेको पाइन्छ! बिटक्वाइन विश्वका लागि एकदमै नयाँ प्रबिधि भएको र परिपक्कता नभई सकेको कारणले यसको मूल्यमा धेरै नै अस्थिरता रहदै आएको छ तेसैले कोहिले यसलाई जुवासंग तुलना गर्दै आइरहेको पाइन्छ! तर बास्तबमा बिटक्वाइन जुवा नभई प्रबिधि वर्गमा समेटिन जान्छ! जुवा र प्रबिधि धेरै फरक कुरा हुन्! २००९ मा सतोशी नकामोतो नामक आबिस्कारकले बिटक्वाइन सुरु गरे पछि लगभग १० वर्षमा बिटक्वाइनले धेरै अगाडी फड्को मारिसकेको छ! बिकेन्द्रिकृत (Decentralise) तरिकाले कसैले पनि लिन/दिन मिल्ने, छिटो र सुरक्षित बिटक्वाइनको मुख्य बिसेषता हुन्! साथै गोपनियता यसको अर्को बिसेषता हो! बिटक्वाइन कारोबारका लागि प्रयोगकर्ता बाहेक कसैको पनि अनुमतिको जरुरि हुदैन! Github मा राखिएको source code का अनुसार कुल २१ करोड बिटक्वाइन मात्र उथ्खनन हुने जनाइएको छ जसमध्ये 17 Million बिटक्वाइन अहिले बजारमा फैलिएको छ र बाकी4Million बिटक्वाइन Mining Process द्वारा अर्को १०० वर्ष सम्ममा उथ्खनन हुने गरि निश्चित गरिएको छ! बिटक्वाइनले कुनै बित्तिय निकाय बिनानै प्रयोगकर्तालाई बिश्वासको भरमा एक आपसमा बित्तिय कारोबार गर्न मद्दत गरेको पाइन्छ! विश्वमा अझै पनि करोडौ मानिसहरु केन्द्रिय बैंकिंग प्रणालीसंग नजोडिएकोले उनीहरुलाई बित्तिय मुलधारमा लिएर आउन बिटक्वाइन जस्तो प्रबिधि उपयोगी भएकोले बिटक्वाइनको लोकप्रियता बढ्दै गैरहेको छ! हामीसंग दैनिक कारोबार गर्न अहिलेसम्म उपलब्ध भएका व्यवस्थाहरु प्रयाप्त छैनन् तेसैले बिटक्वाइनले त्यो अन्तरलाई कम गरिदिएको छ!
सुन्य बाट सुरु भएको बिटक्वाइनको मूल्य अहिले नेपाली रुपैयामा ७ लाख ३० हजार रहेको छ र प्रबिधि अपरिपक्कता कै कारणले बिटक्वाइनको मूल्य तल माथि भैरहेको पाइन्छ! बिटक्वाइनको मूल्य आपूर्ति र मागमा भर पर्दछ! आपूर्ति सिमित हुने र माग बढ्दै जाने भएकोलेनै बिटक्वाइनको मूल्य भबिस्यमा अझै धेरै महँगो हुने जानकारहरु बताउछन्! पश्चिमा लगायत धेरै जस्तो बिकशित राष्ट्रहरुमा बिटक्वाइन प्रयोगकर्ताहरुको दैनिकी लेनदेन को एक हिस्सा बनेको छ! उनीहरु ले बिटक्वाइन प्रयोग गरेर नै समान बस्तु किनबेच गर्ने, बिल भरपाई तिर्ने, कर तिर्ने जस्ता सरकारी स्तर का कामकाज मा समेत बिटक्वाइन प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्! त कतिले बिटक्वाइन लाई एक निश्चित समय मा बिक्रि गर्ने र राम्रो लाभ लिने योजना मा बसेको पाइन्छ! बिटक्वाइनमा लगानी गर्नुको मुख्य उदेश्य पनि येही मूल्य अस्थिरता को फाइदा उठाउनु र भबिस्यमा राम्रो लाभ हासिल गर्नु रहेको छ!